Garsoore Mareykan ah oo ku gacan seyray in la hakiyo soo bandhigidda buug uu qoray John Bolton… – Hagaag.com
Garsoore Mareykan ah oo ku gacan seyray in la hakiyo soo bandhigidda buug uu qoray John Bolton…
Inta badan eedeymaha ku jira buuggaas waxay ku saabsan yihiin wadahadallo khaas ah oo uu madaxweynaha sameeyay, suurtagalna ma aha in caddeymo loo keeno.
Madaxweyne Trump wuxuu caawinaad ka raadsaday madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping si uu ugu guuleysto codbixinta doorashada 2020-ka, isagoo taas baddalkeedana mudnaan siinaya “muhiimadda ay leeyihiin beeraleyda iyo kordhinta soo iibsashada dalagyada shiinaha ee digirta iyo qamadiga, taasoo ku xiran natiijada doorashada”.
Wuxuu sidoo kale sheegay in tallaabada uu shiinaha ku dhisayo xeryaha loogu talagalay maxaabiista siyaasadda ee Muslimiinta Uighur, kuwaasoo laga sameynayo gobolka Xinjiang ay tahay “mid sax ah”.
Madaxweyne Trump wuxuu doonayay inuu faragalin ku sameeyo baaritaannada dambi “si uu taageero shakhsiyeed ugu muujiyo hoggaamiyeyaasha kalitalisyada ah ee uu la dhacsan yahay”. Mr Bolton wuxuu sheegay in Mr Trump uu u heellanaa inuu garab istaago madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, si uu uga caawiyo kiis la xiriira shirkad laga leeyahay Turkiga.
Madaxweynaha Mareykanka wuxuu sheegay in faragalin milatari oo lagu sameeyo Venezuela ay ahaan lahayd “wax fiican” iyo in waddankaas ku yaalla koonfurta Ameerika “uu yahay qeyb ka mid ah Mareykanka”.
Bishii January, Aqalka Cad ayaa sheegay in buugga lagu faafinayo “sir culus” taasoo ay tahay in meesha laga saaro, balse Bolton ayaa diidday arrinkaasi.